यसरी सलमानको लोभ देखाउदै करोडौं लिने सीमान्त गुरुङ परे प्रहरी फन्दामा ! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
यसरी सलमानको लोभ देखाउदै करोडौं लिने सीमान्त गुरुङ परे प्रहरी फन्दामा !
बलिउड स्टार सलमान खानलाई नेपाल ल्याउँछु भन्दै टिकट विक्री गरेर करोडौं ठगी गरेको अभियोगमा ओडीसी इन्टरटेनमेन्टका अध्यक्ष सीमान्त गुरुङलाई प्रहरीले पक्रेको छ ।
उनी काठमाडौंमा गर्ने भनिएको सलमान खान स्टारर दबंग रिलोडेड टुरका नेपाल आयोजक प्रमुख समेत हुन् । झुक्काएर टिकट विक्री गरी ठगी गरेको उजुरीको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको महाशाखा प्रमुख एसएपसी धीरजप्रताप सिंहले बताए ।
सिंहले भने, ‘गुरुङले सलमान खान लगायत अन्य व्यक्ति ल्याउने भन्दै टिकट बेचेर ठगी गरेको देखिएको छ । थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’ फागुन २६ र त्यसपछि टुँडिखेलमा गर्ने भनिएको कन्सर्ट स्थगित भएको थियो ।
आयोजकले नयाँ मितिको रुपमा चाँडै भदौलाई प्रस्ताव समेत गरेका थिए । सलमान खानले समेत अन्तवार्तामार्फत कन्सर्टका लागि नेपाल आउने बताएका थिए । भाइ सोहेल त काठमाण्डूमै आइपुगेर प्रेसमिट गरे । ओडिसीले यसअघि विश्वचर्चित क्यानडियन गायक ब्रायन एडम्सलाई काठमाण्डूमा उतारिसकेको छ ।
दवङ्ग टुर अन्तर्गत सलमान खानलाई नेपाल ल्याउने भन्दै पाँच हजारभन्दा बढी टिकट बिक्री गरी करोडौं ठगी गरेको अभियोगमा उनी पक्राउ परेका हुन् । सलमानलाई काठमाडौंको टुँडिखेलमा ल्याएर कार्यक्रम गर्ने भन्दै लाखौं ठगी गरेका गुरुङलाई लाजिम्पाटबाट नियन्त्रणमा लिइएको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धिरजप्रताप सिंहले जानकारी दिएका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपाको धम्की र कालो हरिणको शिकार गरेको मुद्दामा जोधपुर अदालतले खानलाई पाँच बर्षको जेल सजाय सुनाएसँगै सलमानको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको थियो ।
तर, आयोजक ओडिसीका अध्यक्ष गुरुङले ‘सलमान नेपाल आउने कम्फर्म छ’ भन्दै ढाँटेर हालसम्म पैसा उठाइरहेका थिए । गुरुङले सलमान ल्याउने भन्दै ५ हजारदेखि २० हजारसम्मको टिकट विक्री गरेको जनाइएको छ । ‘गुरुङबिरुद्धमा ठगीको जाहेरी परेको छ’ एसएसपी सिंहले भने, ‘ठगी मुद्दामा म्याद लिएर अनुसन्धान शुरु गर्छौ ।’
केही समयअघि अभियुक्त गुरुङले ३ हजारदेखि ५ हजार दरको टिकट बिक्री भएको बताए पनि ५ हजारदेखि २० हजारसम्मको टिकट बेचेर करोडौं उठाएको पाइएको प्रहरीले जनाएको थियो । आडिसी इन्टरटेनमेन्टले राष्ट्र बैंकमार्फत खानलाई ६ करोड बढी पैसा पठाइसकेको गुरुङले दाबी गरेका थिए । सलमान खान टुँडिखेल आउँदा १० देखि १२ करोडको रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको थियो ।
खानलाई पाँच बर्षको जेल सजाय सुनाएसँगै उनी आउने भनिएको पहिलो मितिको भ्रमण स्थगित भएको थियो । तर, गुरुङले गत ‘मे २६ आ आउने निश्चित छ, उहाँको म्यानेजरले चिन्ता गर्नु पर्दैन’ भन्दै टिकट बिक्री गरेका थिए ।
यस्तो बन्यो ‘साइँली’को फस्ट लुक
पुन एक पटक बिपिन र वर्षा एक साथ !! कहिले लाग्दै छ ‘गोपी’?
प्रियङ्का चोपडा निर्मित चलचित्रको पोस्टर सार्बजनिक
‘चंगा चेट’को ओपनिङ सुखद्, मालिकालाई मिलेनन् दर्शक !
बाजोपना र मध्यम वर्गको वृतान्त चित्रण बोकेको ‘प्रसाद’ को ट्रेलर सार्बजनिक